Imemori Foam nePocket Spring Matress | Rayson | Rayson
\_ "Ubude bungaphansi kwe-chin futhi abufushane njenge- \_" ngaphandle kwengxenye \_ "kodwa futhi lenza izinwele zakhe ziphilile futhi, \_" kusho uDefazio. Kwakungabi nguBob noma uShag, wagcizelela, kepha a - kunesifinyezo esincane ngaphambili. Lokhu kubukeka okuphansi kwesondlo okubeka ubuso.
Lezi zingxenye ngeke zibe amacebo aphelele ngoba bafuna nje ukuthola ukuthi izinto zabo zifanele yini. Abafundi bangadlula kwinqubo kaningi ngaphambi kokuthola umuntu ofanele. Lapho usebenzisa iphrinta yeSikole 3D, ufundisa abafundi ukuthi bangahlanganisa kanjani amafayela ngokuphrinta kwe-3D kulungile. Isikhathi siyigugu, futhi uma umfundi ngamunye ephrinta ngokwehlukana, lokhu kuzoholela esikhathini salo msebenzi wedlula isikhathi esidingekayo.
Le nkampani izokhokha enye imali engu- $ 2 ukufaka izindebe esisekelweni se-walnut ngaphambi kokuyithumela kuye. Uma ngithi \_ "Beka izindebe ezisekelweni ze-walnut \_", ngiqonde, ngaphambi kokuba intombazane ibuyise izindebe, benza umsebenzi ngezindlela ezimbili ezihlukile. Ukusuka lapho, intombazane kungenzeka ukuthi ibeke izindebe zayo entweni yemizwa yakhe, nokuthi lowo mqondo lapho wonke umqondo uphenduka ubuhlanya.